कसरी प्रभाव पछि एक लोगो बनाउन को लागी रचनात्मक अनलाइन
कसरी प्रभाव पछि एक लोगो बनाउन को लागी
एनकर्नी आर्कोया | 16/09/2021 12:49 | ट्यूटोरियलहरू
En प्रभाव पछि, एक लोगो मात्र चीज तपाइँ गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ अनगिन्ती परियोजनाहरु छन् कि तपाइँ एक अद्वितीय फिनिश दिन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ मात्र यस कार्यक्रम को माध्यम बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तर कसरी प्रभाव पछि एक लोगो बनाउन को लागी? यो कार्यक्रम के हो? यदि तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ, तब हामी तपाइँलाई कुञ्जी दिन्छौं ताकि तपाइँ एक बनाउन सक्नुहुन्छ।
1 प्रभाव पछि के हो
2 तर कसरी प्रभाव पछि एक लोगो बनाउन को लागी?
2.1 लोगो फाइल तयार गर्नुहोस्
2.2 प्रभाव पछि लोगो आयात गर्नुहोस्
2.3 रचना संग काम गर्नुहोस्
2.4 फ्रेम संग एनिमेट गर्नुहोस्
2.5 आकार तहहरु संग एनिमेट गर्नुहोस्
2.6 एनिमेशन समय समायोजन गर्नुहोस्
2.7 एनिमेटेड लोगो निर्यात गर्नुहोस्
3 हाम्रो सबैभन्दा राम्रो सिफारिश
प्रभाव पछि के हो
पहिलो कुरा तपाइँ यो ट्यूटोरियल मा शुरू गर्नु भन्दा पहिले थाहा पाउनु पर्छ कि After Effects के हो, कार्यक्रम हो कि हामी प्रयोग गर्न जाँदैछौं। यदि तपाइँ पहिले नै यो स्थापित छ, पक्कै तपाइँ पनी जान्दछन् कि के उपयोग को लागी दिइएको छ, तर यदि यो त्यस्तो छैन र तपाइँ मात्र यसको बारे मा सुन्नुभएको छ, तब यो तपाइँलाई चासो छ।
After Effects वास्तव मा एक छ पेशेवर ग्राफिक्स आवेदन छवि, भिडियो, आदि बनाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ। जुन गतिमा छन् र उनीहरु लाई विशेष प्रभाव छ। अन्य शब्दहरुमा, यो आन्दोलन संग डिजाइन बनाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ।
लोगो को लागी प्रभाव पछि प्रयोग को मामला मा, तपाइँ एक धेरै धेरै आकर्षक परिणाम पाउनुहुनेछ, किनभने त्यो लोगो विशेष प्रभावहरु हुनेछ (यो चमक, सार्नेछ, आदि), केहि, अन्य अवस्थामा, सम्भव छैन।
र यो राम्रो छ? खातामा कि आज इन्टरनेट (र सामाजिक सञ्जाल) मा मानिसहरुको ध्यान मात्र ३ सेकेन्ड छ, एक डिजाइन कि आकार परिवर्तन वा सार्न सक्छ, विशेष प्रभाव छ बनाउन को लागी, यो अधिक आकर्षक बनाउनेछ भन्ने तथ्यलाई लिएर।
तर कसरी प्रभाव पछि एक लोगो बनाउन को लागी?
यो सजीलो मानिसहरु जो आफैंलाई यस कार्यक्रम को लागी समर्पित गर्न को लागी सजिलो छैन। तथ्य यो हो कि यो भुक्तान गरीएको छ र यो पनी प्रयोग गर्न को लागी सजिलो छैन यदि तपाइँसँग अघिल्लो ज्ञान छैन (ट्यूटोरियल संग पनी तपाइँ इन्टरनेट मा पाउनुहुन्छ) यसको मतलब यो हो कि धेरै शुरू गरीएको छैन।
तर यदि तपाइँ समय को बारे मा चिन्तित हुनुहुन्न कि तपाइँ समर्पित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, र तपाइँ एक आधुनिक परिणाम चाहानुहुन्छ र सबै भन्दा माथि कि एक प्रभाव बनाउँछ, तब तपाइँ यसलाई प्रयास गर्नु पर्छ। यसको अतिरिक्त, हामी तपाइँलाई यो ट्यूटोरियल छोड्छौं ताकि तपाइँ एक समस्या छैन।
को चरणहरु तपाइँ एक लोगो को लागी प्रभाव पछि लिनु पर्छ तिनीहरू छन्:
लोगो फाइल तयार गर्नुहोस्
हामी किन तपाइँ एक लोगो को बारे मा कुरा गर्छौं यदि ठीक के तपाइँ प्रभावहरु पछि एक लोगो हो गर्न चाहानुहुन्छ? ठिक छ, किनकि कार्यक्रम आफैंलाई एनिमेट गर्न को लागी एक आधार चाहिन्छ। अन्य शब्दहरुमा, तपाइँ AE को "जादुई उपकरण" को माध्यम बाट जानु भन्दा पहिले एक लोगो बनाउन को लागी र जीवन मा ल्याउन को लागी आवश्यक छ।
यो गर्न को लागी, हामी सिफारिश गर्दछौं एडोब इलस्ट्रेटर वा कुनै अन्य छवि सम्पादन कार्यक्रम को उपयोग गर्नुहोस् वा लोगो डिजाइन। निस्सन्देह, तपाइँ यो सुनिश्चित गर्न को लागी परिणाम वेक्टर ढाँचा मा छ, किनकि यसले तपाइँलाई छवि गुमाउन को लागी बिना यो छवि र सबै कुरा परिवर्तन गर्न अनुमति दिनेछ। साथै, तपाइँ यसलाई आरजीबी रंगहरु मा राख्नु पर्छ, CMYK होइन।
प्रभाव पछि लोगो आयात गर्नुहोस्
अब जब तपाइँ लोगो (राम्रो, मात्र आधार) गरीएको छ, यो कार्यक्रम शुरू गर्ने समय हो। यो गर्न को लागी, प्रभाव पछि खोल्नुहोस्। सुरुमा यो धेरै सामान्य छ कि, यदि तपाइँले यसलाई कहिल्यै प्रयोग गर्नुभएको छैन, वा धेरै थोरै, यो तपाइँलाई एक बिट अभिभूत, तर त्यसपछि यो प्रयोग गर्न सजिलो छ।
तपाइँ के गर्न को लागी लोगो आयात छ। यो गर्न को लागी, जानुहोस् फाइल / आयात / फाइल। तपाइँको फोल्डरहरु त्यहाँ देखा पर्नेछ, बस जहाँ तपाइँ लोगो छ, यो चयन गर्नुहोस् र यसलाई खोल्नुहोस्। र त्यो हो।
रचना संग काम गर्नुहोस्
हामी फाइल मा काम गर्न जाँदैछौं। यो गर्न को लागी, तपाइँ superimpose, सम्पादन र एनिमेसन लागू गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, र तपाइँ यो के अनुसार तपाइँ लोगो संग हासिल गर्न चाहानुहुन्छ। निस्सन्देह, ध्यान राख्नुहोस् कि एक लोगो एनिमेसन पाँच सेकेन्ड भन्दा बढि अन्त्य हुनुहुन्न, र यसको मतलब छ कि तपाइँ धेरै रचनाहरु गर्न को लागी छैन।
यो सत्य हो कि पहिलो पटक तपाइँ धेरै समय बिताउन सक्नुहुन्छ (पाँच सेकेन्ड को परिणाम को लागी) तर तपाइँ धेरै पटक यो गरे पछि त्यो समय काफी छोटो हुनेछ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ एक साधारण पृष्ठभूमि चाहानुहुन्छ, तपाइँ मात्र रचना प्यानल मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र नयाँ / ठोस छनौट गर्न को लागी हुनेछ। यदि तपाइँको लोगो सेतो छ, तपाइँ एक कालो पृष्ठभूमि राख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाइँ वास्तव मा कुनै पनी रंग तपाइँ चाहानुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ।
अर्को, तपाइँ त्यो रंग को नाम र Comp Comp Size मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँ ठीक दिनुहुन्छ र तपाइँ तपाइँको लोगो लाई प्रोजेक्ट प्यानल बाट टाइमलाइन मा तान्नु पर्छ। यस तरीकाले तपाइँ यो कसरी देखिन्छ को एक पूर्वावलोकन देख्नुहुनेछ। यदि तपाइँ मात्र पृष्ठभूमि देख्नुहुन्छ, तपाइँ तहहरु आदान प्रदान गर्न को लागी, ताकि तपाइँको (लोगो को) पहिले देखिने छ।
प्रभावहरु को लागी एक धेरै प्रभावी चाल स्तरित संरचना (तपाइँ लोगो फाइल (रचना प्यानल मा) मा सही बटन संग यो गर्न सक्नुहुन्छ र बनाउनुहोस् / तह कम्प गर्न को लागी रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ)।
फ्रेम संग एनिमेट गर्नुहोस्
प्रभाव पछि, र धेरै अन्य एनिमेशन कार्यक्रमहरु, फ्रेम संग काम। यी मार्करहरु को एक प्रकार को रूप मा कार्य गर्दछ कि समय को पहिचान गर्दछ जब एनीमेशन शुरू र अन्त्य गर्न सक्छ।
एक धेरै सरल एक कि तपाइँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै उपस्थिति। तपाइँ सबै गर्न को लागी अस्पष्टता मा ध्यान केन्द्रित छ, जो १००% हुनेछ किनकि लोगो पूर्ण रूप देखिने छ। जे होस्, यदि तपाइँ अपारदर्शिता बटन को छेउमा स्टपवाच बटन मा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाइँ एक मार्कअप देख्नुहुनेछ जहाँ तपाइँ एक टाइमलाइन सेट गर्न सक्नुहुन्छ, यो देखा पर्न सक्छ र एनिमेटेड तरीका मा गायब हुन्छ। उदाहरण को लागी, ० देखि १००%सम्म दुई सेकेन्ड मा अस्पष्टता परिवर्तन छ।
त्यहाँ फ्रेम संग एनिमेट गर्न को लागी धेरै अधिक तरीकाहरु छन्, तपाइँ मात्र एक तपाइँलाई सबैभन्दा मनपर्छ र यसलाई लागू गर्नुहोस्।
आकार तहहरु संग एनिमेट गर्नुहोस्
एनिमेट गर्न को लागी अर्को विकल्प (जुन अघिल्लो एक संग संयुक्त गर्न सकिन्छ) आकार को परतहरु संग एनीमेशन हो। यो केहि हद सम्म अधिक उन्नत छ, तर यो तपाइँ लाई अनुमति दिन्छ धेरै धेरै पेशेवर र जिज्ञासु परिणाम बनाउन, तेसैले यो एक नराम्रो विचार यो मा एक नजर राख्न को लागी छैन। उदाहरण को लागी, तपाइँ पाठ आफैं को लागी, आगो वा बर्फ बाट यो बढ्न को लागी, आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
एनिमेशन समय समायोजन गर्नुहोस्
हामीले तपाइँलाई पहिले भनेका छौं, एक लोगो को एक एनिमेसन पाँच सेकेन्ड भन्दा लामो हुनु हुँदैन। तर, त्यो समयमा, तपाइँ माथिको सबै काम गर्न को लागी आवश्यक छ, र एकै समयमा अनुमति दिनुहोस् लोगो स्पष्ट देख्न सकिन्छ र यो व्यक्त गर्न चाहन्छ के राम्रो संग बुझिन्छ। तेसैले, जहाँ सम्म सम्भव छ, यो राम्रो छैन कि यो overcharge नगर्नुहोस्।
सादगी को लागी हेर्नुहोस् र, त्यहाँ बाट, केहि दिनुहोस् कि लोगो को सार बढाउँछ। अब छैन।
एनिमेटेड लोगो निर्यात गर्नुहोस्
एक पटक तपाइँ समाप्त गरेपछि, तपाइँ तपाइँको एनिमेटेड लोगो हुनेछ, र तपाइँ मात्र यो डाउनलोड गर्न को लागी हुनेछ।
यो गर्न को लागी, हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ फाइल / निर्यात / एडोब मिडिया एनकोडर कतार मा जोड्नुहोस्। यस प्रकार, तपाइँ यो एक mp4 फाइल मा हुनेछ। यदि तपाइँ यो GIF मा चाहानुहुन्छ, तपाइँ मात्र मिडिया इन्कोडर स्क्रिनमा जानुहोस् र त्यो ढाँचा चयन गर्नुहोस्।
हाम्रो सबैभन्दा राम्रो सिफारिश
प्रभाव पछि एक कार्यक्रम हो जसको साथ तपाइँ महान परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाइँ धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्छ। यदि तपाइँ एक साधारण लोगो बनाउन चाहानुहुन्छ, तपाइँसँग भिडियो ट्यूटोरियल छ कि तपाइँ उनीहरुलाई पछ्याउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ पनि सक्नुहुन्छ प्रभावहरु को लागी तपाइँ प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ उनीहरुलाई जोड्नुहोस्।
के तपाइँ प्रभावहरु संग एक लोगो बनाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ? शायद ट्रेलर जस्तै केहि अधिक महत्वाकांक्षी?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी प्रभाव पछि एक लोगो बनाउन को लागी
Indesign: यो के को लागी हो?
कसरी इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू बनाउने